काठमाडौं । प्याज तथा लसुनमा हावालाई शुद्ध बनाउने तथा किटाणु नष्ट गर्ने गुण हुन्छ भन्ने कुरा त प्रायलाई थाहा नै होला । तर, राती सुत्नुअघि प्याजको एक टुक्रा पैँतालामा राख्दा मिल्ने फाइदाबारे तपाईंलाई जानकारी छ ? सायद नहुनसक्छ ।
यसरी प्याजको टुक्रा राख्दा शरीरका अंगहरुलाई स्वस्थ राख्न सकिन्छ । यो कुरा मेडिकल्ली पनि प्रमाणित भएको छ कि प्याजमा रहेको फस्फोरिक एसिडले धमनीमा घुसेर रगत शुद्ध बनाउँछ ।
अर्को तर्फ पैँतालाले हाम्रो शरीरको भार थाम्नेमात्र होइन यसको सिधा कनेक्सन हाम्रो शरीरका विभिन्न अंगहरुसँग हुन्छ । पैतालामा करिब ७०० वटा तन्तुहरुको कनेक्सन हुन्छ, जुन शरीरका विभिन्न अंगहरुसँग सम्बन्धित छ ।
हाम्रो पैँतालाले विजुलीको एक शक्तिशाली सर्किटको जस्तो कामसमेत गर्छ । तर, जुत्ता-चप्पलको प्रयोगले यो निश्क्रिय प्राय: हुन्छ । त्यसैले त चिकित्सकहरु दिनमा केही घण्टामात्र भएपनि नाङ्गो खुट्टाले टहलिन सुझाव दिन्छन् ।
रक्तदान अघि अपनाउनुहोस् यी सावधानी र लिनुहोस् यस्ता फाइदा
खाली पेटमा किन लसुन खाने ?
यस्ता छन् लामखुट्टे भगाउने घरेलु उपाय
खानेपानीमा दिसामा हुने कीटाणु कोलिफर्म भेटियो
बच्चाहरुलाई चुम्बन गर्नु घातक
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरुलाई सेनेटरी प्याड दिइने
हातलाई यसरी सफा गर्ने गर्नुहोस्
स्वास्थ्य बीमा गरे पनि सेवा पाएनन्
डिएनए परीक्षण गराउने बढ्दै, प्रयोजन फरक-फरक
यस्ता छन् अनुहार गोरो बनाउने घरेलु उपायहरु
थाहा पाउनुहोस् यी अवस्थामा अदुवाको सेवन विष बन्छ
चम्किलो अनुहारका लागि यसरी प्रयोग गर्नुहोस् नुन
बेसार पानी किन खाने ?
बच्चाको कान कसरी सफा गर्ने ?
पाँच महिनादेखि तलब नपाएपछि भरतपुर महानगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित
वास फोरमद्वारा झाडापखाला प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन
ब्लड प्रेशर सामान्य बनाउन के गर्ने ?
दही खानुका विशेष ६ फाइदा